Uzihlamba njani izihlangu zakho kwaye uzenze zigqibelele | IBezzia
Ukuba ungomnye wabathandi bentuthuzelo kwaye udibanisa izihlangu zakho nayo nayiphi na inkangeleko, unethamsanqa kuba zikwimo epheleleyo. Nokuba zenziwe ngelaphu, iiteki ezimibalabala okanye ezemidlalo zakudala, iiteki zezinye zeengubo ozithandayo. Ungazidibanisa nasiphi na isitayile kwaye unxibe ngokugqibeleleyo kwaye ukhululekile.
Ngoku, ukunxiba iiteki kunye nokulunga ayisiyonto ilula kangako, kuba zizihlangu ezibala ngokulula. Kwaye akukho nto ikhulula ngaphezulu kwezicathulo ezimdaka. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungazihlamba njani izihlangu kwaye zilungile, ungaphoswa zizo zonke iingcebiso kunye namacebo esikushiya wona ngezantsi.
Uzihlamba njani izihlangu?
Zonke zapatillas Awafani, enyanisweni, kukho iintlobo ezahlukeneyo nangakumbi zelaphu ezenza nzima umsebenzi wokucoca izihlangu. Ngaphambi kokuzihlamba, kuya kufuneka ujonge izindululo zomenzi kwaye ufumanise ukuba zinokufakwa kumatshini wokuhlamba okanye hayi. Nangona kunokwenzeka ukuba uhlambe umatshini ngaphandle kwengxaki, kodwa ngeengcebiso ezimbalwa zobushushu kunye nokujikeleza.
Ukuhlamba izihlangu zakho kwaye uzenze zigqibelele, kufuneka uwahlule amalungu azo uzihlambe ngokwahlukeneyo. Qaphela ezi ngcebiso:
Iintambo: Awunakuzivasa izihlangu, kuba azinakucocwa kakuhle. Ukongeza, baya kuthintela amanzi kunye nesepha ekufikeleleni kuzo zonke iikona zangaphakathi kwesihlangu. Susa ii-laces kwaye uzifake emanzini ngamanzi, i-detergent ye-bleaching, okanye i-baking soda.
Insoles: Kwi-insoles ibacteria evelisa ivumba elibi iyanda. Ukucoca rhoqo kubalulekile ukuze kuthintelwe ukungunda kunye nevumba leenyawo. Kodwa kungcono ukuba uzihlambe ngesandla, kuba kumatshini wokuhlamba banokuwohloka kwaye bahlukane ngokulula. Thatha iitemplate uzikhuphe kumxube wamanzi, iviniga emhlophe kunye nesoda yokubhaka.
Okukuphela: Inxalenye ethambekele ekungcoleni kakhulu yiyo kuphela, ke unokuyihlamba rhoqo ngaphandle kokuzihlamba ngokupheleleyo. Sebenzisa ibrashi encinci, chwetheza ibrashi yesikhonkwane, thambisa ngesicoci kude kususwe ubumdaka.
Isoliti emhlophe: Ukuba kuphela kwezihlangu zakho zimhlophe, ungasebenzisa intlama yamazinyo emhlophe. Khuhla ngebrashi endala kwaye uya kuwubona umohluko.
Ilaphu: Ukuba izihlangu zakho zinokuhlanjwa ngomatshini, kuya kufuneka wenze inkqubo yokuhlamba okufutshane, kuyabanda kwaye ngaphandle kokuhlamba kwangaphambili. Nangona kungacetyiswa ukuba ubeke izihlangu kumatshini wokuhlamba rhoqo, kuba iinxalenye zentsimbi kunye nemitya yezihlangu zinokonakala ngokulula.
Uzihlamba njani iiteki ezimhlophe
Akukho hlotyana lingasebenzisi iiteki ezimhlophe, zikhululekile, kulula ukuzidibanisa nayo nayiphi na ingubo kwaye zilungele usuku nosuku. Inxalenye embi kukuba bangcola ngokulula, ngamanye amaxesha kuyonqena ukuyisebenzisa. Ingakumbi ukuba awazi ukuba ucoca njani ukuze baqhubeke nokugcina umbala omhlophe njengosuku lokuqala. Iindaba ezimnandi zezokuba ngala maqhinga uya kuwenza amateki akho amhlophe akhangeleke kraca kraca.
Ukuhlamba iiteki zakho ezimhlophe zamalaphu, qala ususe imitya kwaye uyihlambe ngokwahlukeneyo. Emva koko sebenzisa ibrashi encinci ukususa uthuli kwilaphu. Ukuba banamabala, lungisa umxube wamanzi, iviniga emhlophe kunye ne-bicarbonate kwaye uthambise ngebrashi kwinxalenye eza kunyangwa. Ngoku, lungisa isitya ngamanzi afudumeleyo, faka iipunipoons ezi-2 zesoda yokubhaka kunye nenye 2 yesepha yesitya ngaphandle kwedayi.
Gcoba i-slippers yengubo imizuzu embalwa kwaye usebenzise ibrashi ukucoca kakuhle onke amalaphu. Yipule isepha ngelaphu le microfiber elifakwe emanzini abandayo. Ukugqiba, bayeke umoya wome kwaye uphephe ukukhanya kwelanga. Nangona iblitshi yendalo, inokuwohloka amalaphu eembadada zakho. Beka endaweni egudileyo kwaye ubavumele ukuba bome ngokupheleleyo ngaphambi kokuyisebenzisa kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Uzihlamba njani izihlangu zakho kwaye uzenze zibonakale zilungile